Wmv Editor: Sida loo Edit wmv Faylal ay ku Mac / Winows
> Resource > Video > Sida loo Edit wmv Faylal ay la wmv Tifaftiraha Mac / Windows
Movies badan oo ay ku kaydsan yihiin oo la wadaago in qaabka wmv online ay size yar oo tayo wanaagsan leh. Files wmv lagu ciyaari karo computer ciyaartoyda sida Windows Media Player, MPlayer ama VLC. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel filimada wmv, sida jarida qaybo aadan rabin, ama codsan saamaynta, kala guurka, Intro / credits, iwm, waxaan jeclaan lahaa inaan la wadaagin sida loo edit files wmv la editor awood wmv xoogaa tallaabooyin ah gudahood .
Qaybta 1aad: Sida loo Edit wmv File
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit wmv File
Xoog wmv Editor:
Si fudud jar, isku shaandheyn, dalagga, ku milmaan iyo isu wmv video files;
Shakhsiyeeyo wmv videos aad la qoraalka, filter iyo kala guurka saamaynta hodanka ah,
Codso saamaynta qabow sida Janjeeri-wareeg, Muuse, Jump jarid, Face-off, iyo in ka badan oo la click fudud;
Save the video ah saxar qaabab kala duwan, gubi in DVD ama geliyaan gal Facebook & YouTube.
Maxaad Dooro Wondershare wmv Editor
Tani Editor wmv ka dhigaysa qalab video tafatirka fududahay in la fahmo iyo nayaa ay ka shaqeynayaan si ay u tahay heli karo in dadka isticmaala ee heer xirfadeed kasta.
Si fudud jar, isku shaandheyn, dalagga, gooyay boos kasta ee aad FLV video; ganaax-habayn dhalaalka, bedelkeeda, xawaaraha ciyaareed, mugga audio, garoonka si aad u hagaajisid video oo tayo leh.
Kala duwan Video Raadka
Samayso wmv video hufan oo aqoon leh iyadoo la siinayo kala guurka laga cabsado, koobab iyo saamaynta. Waxa kale oo jira saamaynta sare sida PIP, Janjeeri-wareeg, Jump gooyaa oo dheeraad ah.
Share Siyaabo kala duwan
Upload curiyay si aad u YouTube ama Facebook gudaha ka barnaamijka, ka dhigi videos la jaan qaada Qalabka telefoonada gacanta, awood aad si ay u abuuraan cajalladaha - yaabka leh!
Sidee si fudud Edit Wmv Video:
1. Ma Qaar ka mid ah ayeey aasaasiga ah
Qalabka video aasaasiga ah sida dalagga, isku shaandheyn, dhajisan, bedelkeeda dhigay / Saturation / nuur dhalaalaya, dhigay Fast / mooshin gaabis ah, jar oo kala, ayaa dhamaantood ka mid ahaa in Video Editor. Waxaad u dhigi karto video wmv ku saabsan waqtiga iyo laba jibaar waxa guji inay sameeyaan tafatir aasaasiga ah ee suuqa kala pop up.
2. Ku dar-guur iyo Raadka
Si aad u codsato kala guurka oo u dhexeeya goobaha kala duwan, kaliya riix "guurka" tab on interface ugu weyn iyo jiidi aad saamayn guurka jecel in clips ah. Laba-guji kala guurka ah si ay u dejiyaan markii mudada kala guurka ah. Waxa kale oo aad u sheegi kartaa software ka dhex dooranayo kala guurka aan kala sooc lahayn.
In ka badan 70 saamaynta muuqaal ah ayaa sidoo kale diyaar u yihiin in la isticmaalo. Saamaynta ku daray in lagu isticmaali doono videos iyo sawiro. Wixii saamaynta qaar ka mid ah, waa inaad ku labanlaabtaa riixi kartaa iyaga oo ku saabsan in la beddelo-beegyada uu u.
3. Codso Advanced Faalladaada
Waxa kale oo aad qaataan karaa aalad awood gundhig ugu Video Editor in aad ku darto oo xiiso dheeraad ah si aad video ah. Tusaale ahaan, ku dar jeexan boodi u dhexeeya goobaha, la abuuro dhow-up in ay diiradda saaraan goobta aad jeceshahay in dadkii badnaa, u saaray mosaic si ay u qariyaan shakhsi ama xuquuqdiisa info, badalay Wajigooda in aad video leh waji artful, iyo in ka badan. Just muujiyo aad video, xaq waxa guji dooro "Power Tool" si ay u helaan guddiga.
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit wmv File (Video Tutorial)